Keli-talisnimo ,Qolo dad gaar ah iyo goballo gaar ah ma aqbali karo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
15th November 2014 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Madaxweynaha Dowladda Federalka Somalia, Md. Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa markii ugu horreysay hadal jeediyey, kadib, markii uu shaac baxay khilaafka isaga iyo Ra’isul-wasaare C/weli Sheekh u dhexeeya.
Madaxweynaha oo hadal Muuqaal Video ah gelinkii dambe ee maanta jeediyey, lagana baahiyey Idaacadda iyo Telefishinka Qaranka, ayaa waxa uu kaga hadlay Qorshaha Dowladda ee Hiigsiga 2016, Isku-dhafka Ciiddamadda Qaranka iyo Buuqii dhawaan ka dhashay Kulankii Xildhibaanadda ee fowdada ku dhamaaday.
Madaxweynaha waxa uu tilmaamay inay Dowladiisa ka go’an tahay meelmarinta Hiigsiga cusub ee 2016, inay dhacdo Doorasho Dimuqraadi ah, in la helo Dstuur Dhamaystiran oo Joogto ah iyo in la hirgeliyo Nidaamka Dimuqraadiyadda iyo Is-maamul-gobaleedyadda.
Mar uu ka hadlayey buuqii Barlamaanka Federalka ee fowdada ku dhamaaday, waxa uu tilmaamay inay taasi muujinayso inay Diquraadiyadda dhismayso.
Wuxuuna ku baaqay inaan lagu mashquulin waxa shalay dhacay ee lagu dadaalo Danaha Qaranka.
Madaxweynuhu kama hadlin khilaafka isaga iyo Ra’isul-wasaaraha, laakiinse waxa uu si guud uga hadlay inaysan Somalia marnaba ka socon karin Keli-Talisnimo.
“Rabitaanka Dadweynaha Somalia marna ma oggolaan doonaan Keli-talisnimo ka hanaqaada Somalia, Marnaba la oggolaan mayo Keli-talisnimo dad gaar, gobal gaar si ay Talada dalka ugu maamulaan” ayuu yiri Madaxweynaha oo sheegay in laga soo gudbay Cahdigii Keli-talisnimadda “dictatorship”.
Khudadda Muuqaalka ee Madaxweynaha oo socotay ilaa 8 daqiiqo, waxa uu si gaar ah ugu dheeraaday Arrimaha Ciiddamadda Qaranka, waxaana uu sheegay inuu Shaqsi ahaan iyo Dowlad ahaan u ololeyn doono sidii Ciiddamadda Qaranka la isugu dhafi lahaa, isla markaana ay Ciiddamadda uga dhex muuqan lahaayeen Soomaalida oo dhan.
“Waxaan ballanqaadayaa inaan xoog, caqli iyo waqti isugu geeyo sidii loo mideyn lahaa Ciiddamadda Qaranka, min Unug ilaa iyo Horrin” ayuu Madaxweynaha si gaar ah wacad ugu maray.
Hadalka Madaxweynaha ayaa u muuqda mid uu boorka kaga jafay inay Dowladiisa ka go’an tahay Hirgelinta Qorshaha Hiigsiga cusub ee sannadka 2016, walow uusan ka hadlin Khilaafka shaac-baxay ee kala dhexeeya Ra’isul-wasaaraha iyo Baaqyadda Dowladaha taageera Dowladda Federalka ku codsanayaan in la xaliyo khilaafkaasi.